Toliara : nivoka ny “paramédicaux” 68 | NewsMada
Toliara : nivoka ny “paramédicaux” 68
Namoaka ny andiany voalohany “Santatra” ny sampana fitsaboana ao amin’ny oniversiten’i Toliara ny faran’ny herinandro lasa teo. “Infirimer” 13 no nahazo ny mari-pahaizana taorian’ny fahavitany ny fianarany. Nanampy ireo ny andiany faharoa “Vonona” ho an’ny mpampivelona sy “infirmier” 55. Tanjona ny fampihenana ny tahan’ny tsy fahasalamam-bahoaka indrindra ho an’ny faritra Atsimo Andrefana. “Anjaran’ny minisiteran’ny Fampianarana ambony ny nanome ny fanofanana ireo mpianatra ireo izay hikarakara ny fahasalaman’ny mponina indrindra any ambanivohitra”, hoy ny minisitra Rasoazananera Marie Monique nandritra ny hetsika tany an-toerana.
Ankoatra izay, nahazo efitrano famakiam-boky sy efitrano iray hafa ny profesora ao amin’ny sampana haisoratra sy ny siansa maha olona ao amin’ny oniversiten’i Toliara ihany. Vita koa ny fotodrafitrasa ampianarana ao amin’ny sampana lalàna, fitantanana ary sosiolojia (Degs). Ho fanatsarana ny fampianarana, notolorana fitaovana toy ny “vidéo projecteur” sy ordinatera ny oniversite ao Maninday.
8 000 amin’izao fotoana izao ny isan’ny mpianatra mandranto fianarana ao. Maro ny lalam-piofanana efa mandray mpianatra: Lettres et sciences humaines, ny Ecole normale, ny fianarana ho mpitsabo, ny institut d’enseignement supérieur (IST teo aloha) telo ao Menabe, Anosy ary Toliara. Momba ny rafitra LMD, nanambara ny minisitra fa eo am-panangonana ny tolo-kevitra fanatsarana ny rijanteny vaovao hifehy izany rafitra izany ny tekinisianina. Miainga avy amin’ny isam-paritra ny tolo-kevitra ary avondrona ho iray rehefa vonona.